Caqabado: Sababaha Aasaasiga ah Sababta Sababtoo ah Khasaarayaasha Weerarkani Taas ama Websiteka
Waa salaadda qof kasta oo leh lahaansho bog ah oo aan ku dhicin gacmaha cyberdambiilayaasha sida koodhka. Wareegga adduunka oo idil waxaa ka buuxa jilayaal badan kuwaas oo qaar ka mid ah ay yihiin kuwo sharci ah iyagoo aan caddayn ujeedooyinka.Ganacsi kasta oo internetka ah waa wax walba oo ku saabsan SEO iyo sida loo horumariyo internetka. Ammaanka websaydhku marnaba walaaca ugu muhiimsan marka la samaynayo boggaga internetka - custom covert cameras.Dadku waxay inta badan isku dayaan inay dhisaan goobaha la socdo isticmaalaha ugu dambeyn ama goolka ugu dambeeya ee websiteka maskaxda ku hay. Waxa ay ogaan waayeen in kharaj-bixiyayaashu ay kharash-gareeyaanhabeenkii hurdo la'aanta ah ee isku dayaya in ay abuuraan ficilo iyo farsamo, kuwaas oo kor u qaadi kara shaqadooda. Qaar ka mid ah weerarrada hack-ka, kuwaas oo khadka ay isticmaalaan iyagaMudada gaaban oo dhan waxay ku xiran tahay qalabka cusub iyo kuwa soo socda, taas oo ka dhigaysa khatarta ganacsiga oo dhan.
Si aad uga fogaato hanti-dhowrayaasha, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad bartid sababta ugu weyn ee hackers-ka loo jabiyoshabakadaha. Halkan waa liiska ay sameeyeen Max Bell, Sare Maareeyaha Guusha Macaamilka, taas oo iftiiminaysa iftiin cusub sababaha ka dambeeya weerarka hal weerar kasta oo halis ah:
1. Spam SEO
tartan aan toos ahayn ee macaamiil e-ganacsi waa yaqaan, khaasatan marka qawaaniinta ay ciyaaraanDoorka. Dadkani waxay awood u leeyihiin in ay ka xadaan liiska emailka laga helo bogga tartanka iyo iyaga oo isticmaalaya macaamiisha. In kalekiisaska, waxay keeni karaan goobta sida Hacksyada DDoS, halkaas oo ah boorsooyinka waawayn ee waawayni ay weeraraan server-keeda oo leh malaayiin codsiyo markiiba. KuwaasKoodariyayaashu waxay markaa dalban karaan mushahar si looga saaro ficiladooda taasoo keeneysa khasaaro weyn.
2. Dhicin lacag.
Khiyaanada Cyber ​​ayaa shidaal ka soo qaada jabinta.internetka ayaa ka yimid akoonnada bangiga iyo nidaamyada kale ee lacag bixinta sida PayPal. Xaaladaha kale, khaniisiyeyaashu waxay isticmaali karaan SQL Injection si ay u galaan dadkaxisaabaadka iyo inay sameeyaan lacag lacageed sidii ay ahaayeen astaamaha dhabta ah. Kaysariyayaasha kale ayaa amaahiya amaahda iyagoo isticmaalaya macluumaad shakhsi ah oo la xaday.
3. Wareeg macluumaadka xiriirka.
Hackers waxay helayaan macluumaad badan oo qof ah. Diidmada Cyber ​​ayaa isticmaali karta macluumaadkansi loogu hanjabo dhibbanaha. Shakhsiyaadka kale waxay geli karaan dembiyo la isticmaalayo koontooyinka la jabsaday, oo kaliya inay u gudbiyaan dhibaatada si aan loo daboolinqof. Xaaladaha kale, macluumaadka shakhsiyeed sida kaarka aqoonsiga, SSN iyo ruqsadda wadista waxay noqon kartaa shey iibka ah ee shabakada mugdiga ah. Xatooyada Aqoonsigaiyo waxyaabaha kale ee caanka ah waxay ku xiran yihiin xisaabyadan. Isticmaalayaasha waa inay iska ilaaliyaan noocyada noocaas ah ee khawano.
4. Cadaadiska nabadda.
Qaar ka mid ah jilayaasha qaar maahan inay qasab ku noqdaan inay xadaan cabsigelinta dhibbanaha. Si kastaba ha ahaatee,waxay wax ka qabtaan xaaladda ammaanka internetka waxayna ka dhigi kartaa boggaaga inuu helo calanka Google hack. Website-yada noocan oo kale ah ayaa dhib ku ah darajadaiyo geeddi-socodka oo dhan wuxuu sameyn karaa dadaalkaaga SEO-ga.
Waxaa jira sababo badan oo la xiriira sababta kombiyuutarka uu u heli lahaa danta ah in lagu jabiyo website-kaaga.Dhamaan internetka waxaa ka buuxa dambiilayaal internetka ah kuwaas oo qaata khayraadyo kala duwan iyo sidoo kale ammaanka isticmaalaha. Dhibaatada internetka oo dhandad badan oo la kulmay hackers waa mid aad u argagax leh. Tusaale ahaan, jaangooyuhu wuxuu soo bandhigi karaa noloshiisa gaarka ah ee qofkaiyada oo loo marayo sawirro qaar, oo ay ka qaadi karaan internetka. Qaar ka mid ah sababaha ay hackers uga saari karaan boggaaga internetka ayaa ku jira tilmaamahan. Waxaad awoodi kartaaBaro qaar ka mid ah iyaga oo xoojiya amniga shabakada e-commerce ee ka dhanka ah hackers.